बाथलाई खाना बार्नुपर्दैन, बाथ राेग सानो बच्चा देखि बुढाबुढीसम्म जुनकुनै उमेर समुहलाई पनि लाग्न सक्छः डा अभिलाषा शाह - Sunaulo Nepal
बाथलाई खाना बार्नुपर्दैन, बाथ...
बाथलाई खाना बार्नुपर्दैन, बाथ राेग सानो बच्चा देखि बुढाबुढीसम्म जुनकुनै उमेर समुहलाई पनि लाग्न सक्छः डा अभिलाषा शाह
पौष १५, २०७८ बिहिवार १३:४२ बजे
अहिले देशैभरि चीसो बढिरहेको छ । बढ्दो चीसोसँगै बिरामीहरु पनि बढेका छन् । पुराना दीर्घ रोग भएका देखि चीसोबाट हुने पखाला देखि रुघाखोकी, निमोनियाको बिरामी बढेका छन् । यो चिसोमा दम र बाथका रोगीहरुलाई बढी च्याप्ने गरेको देखिन्छ । आज हामीले बाथ रोगका बिरामीको कसरि हेरचाह गर्ने, औषधि उपचार कसरि गर्ने, अन्य रोग र बाथरोगको लक्षण कसरि छुट्याउने भन्ने बारे चिकित्सक डा अभिलाषा शाहसँग हामीले संवाद गरेका छौँ ।
संवादको क्रममा डा शाहले मानिसहरुमा देखिएका अन्य रोगहरुको र बाथ रोगको लक्षण उस्तै लाग्ने भएकोले बाथ रोगको लक्षणमा पनि मानिसहरु गलत धारणा र अनुमानले उपचार गरिरहेको बताउनु भयो । डा शाहले बाथ रोग सम्बन्धि समाजमा केहि गलत धारणा रहेको बताउनु भयो । यस्तो अवस्थामा बाथ रोगको उपचार गर्नु पर्नेमा अन्य रोगको उपचार गर्न खोज्ने अन्य रोगको उपचार गर्नुपर्नेमा बाथ रोगको उपचार धेरै हुने पाइएको छ । डा शाहले बाथ रोगको पहिचान परिक्षण गरेरमात्र स्पष्ट हुने बताउनु भयो । प्रस्तुत छ डा अभिलाषा शाह सँग बाथ रोग सम्बन्धि गरिएको कुराकानी ।
डा.अभिलाषा, बाथ कस्तो खालको रोग हो?
बाथले शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ । नेपालमा यस रोगबारे धेरै भ्रम मात्र रहेका छन् ।
कस्ताखालका भ्रमहर छन् ?
यो रोग बूढाबूढीलाई मात्र लाग्छ भन्ने भ्रम छ । तर सानै उमेरदेखि लाग्न सक्छ । लक्षणचाहिँ २० देखि ३० वर्ष उमेर पुगेपछि देखिन्छ । र, अर्को कुरा बाथ रोग लागेपछि खाना बार्नुपर्छ भन्ने विश्वासले थप रोग लाग्छ । सयभन्दा बढी प्रकारका बाथ रोगमध्ये युरिक एसिडबाट हुने ‘गाउट’ बाहेक कुनैमा पनि मुख बार्नुपर्दैन । तर बाथ भन्नासाथ खाना बार्दा जीउलाई चाहिने खाना नपुगेर अन्य समस्या देखिने गरेको धेरै छ ।
गठिया । यसमा शरीरका जोर्नीहरु बांगिने भएकाले एकदमै दुख्छ । बांगिएका अंग सीधा बनाउन अप्रेसनबाहेक अरु सम्भव छैन । जुन अवस्थामा छ, त्यसबाट बढ्न नदिन भने सकिन्छ ।
बाथरोग एकप्रकारको अटो इम्युनडिजिज पनि हो । अटो इम्युन भन्नाले के हो भने जुन हाम्रो रोगसँग लड्ने शक्ति हुन्छ, जसलाई इम्युन सिस्टम भनिन्छ । बाथरोगको बिरामीहरुमा यो इम्युन सिस्टम अटोम्याटिकली काम काम गर्ने हुन्छ । अटोम्याटिकली आफ्नै अंगहरुलाई हानी, नोक्शानी पुर्याउने, जस्तै जोर्नीदेखि लिएर भित्रि अंग मुटु, मिर्गौला, कलेजो, फोक्सो, आँखा, छाला, विभिन्न अंगमा असर गर्ने देखिन्छ । यो एउटा अटो इम्युन रोग हो । कुनै बाथरोग वंशानुगत पनि आएको देखिन्छ । स्पनडाइलो अथराइटिस भन्ने बाथरोग भयो, वंशानुगत आउने बाथ पनि हो । कुनै बाथ जसले मांशापेशीलाई मात्र असर गर्दछ ।
# डा. अभिलाषा शाह